8 Zavatra tokony hatao rehefa Bermuda
Na mikarokaroka izany amin'ny tantara manan-karena sy mahavariana ianao na ny telozoro maoderina, Bermuda dia manana karazana magie momba izany. Nogadraina tao anaty rano mangatsiaka mangatsiaka tao amin'ny Oseana Atlantika izy roa tonta mandeha an-tongotra avy any New York City, Bermuda dia mahatsiaro ny hafainganam-pandehany - ampahany kelin'ny tanàna kely, tantaram-piainana velona, ​​ny paradisa rehetra.
Na inona na inona tanjonao mandritra ny vakansy, ny nosy shinoa 181 any Bermudes dia manolotra mihoatra noho ireo jiro sarisarim-bozaka malaza (izay misy betsaka). Ireto ny zavatra 8 tsara indrindra atao any Bermuda amin'izao fotoana izao.
Jet Ski Amin'ny Alalan'ny Bermuda
Azonao atao ny manamboatra skoto eny rehetra eny ao amin'ilay nosy, fa ny toerana tsara indrindra ahafahana manararaotra ny rano misokatra dia ao amin'ny toerana mistery izay nahatonga ny faritra malaza: Ny Bermuda Triangle. Manana fitsidihana avy any amin'ny Centre Tour Centre ary ianao dia tsy hanana afa-tsy ny fahafahana hijery ireo rano voapoizina fa koa hanome sakafo ireo sekoly eo an-toerana trondro izay monina ao.
Manaova fofona mahafa-po
Ny tanànan'i St. George, tanàna manan-tantara iray an'ny UNESCO izay niorina tamin'ny taona 1692, dia iray amin'ny zaridainan'ny zaridaina ary ny kolontsaina tranainy indrindra amin'ny nosy anglisy. Anisan'ny toerana manan-tantara ao an-tanàna ny an'i Lili Bermuda, tovovavy efa tranainy antitra iray izay mbola feno tanana ny tavoahangy tsirairay. Mivezivezy manamboatra fofona mahazatra amin'ny fanampian'ny loham-pofona.
Hijery ny zavakanto ankehitriny
Na aiza na aiza toerana hijanonanao dia mivezivezy any amin'ny Hamilton Princess Hotel any amin'ny renivohitr'ireo nosy ary misotro zava-pisotro na sakafo ao amin'ny Restaurant Marcus. Ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fandraisam-bahiny dia manamboatra fanangonana zava-mahatalanjona ny zavakanto amin'izao vanimpotoana izao, anisan'izany i pieces, avy amin'i Banksy, Jeff Koons, Damien Hirst ary Andy Warhol. Maka fitetezana an-dalam-pandehanana mitaingina bisikileta ianao ary hahazo ny kolontsain'ny tranom-bakoka ho an'ny tranombakoka, dia miditra an-tsisintany ny iray amin'ireo nosin'ny Swizzles, sombin'ny rongony mainty, rombolo volamena, siramamy anana, sokatra jono, ary bitters.
Spy Turtles Avy ao amin'ny Board Board
Tsy misy fitsangatsanganana mankany Bermuda dia feno raha tsy miditra ao amin'ireo rano madio mangatsiaka. Jereo ny sambon-dranomasina maromaro, jereo ny torapasika maromaro kokoa eny an-toerana ary alao ny fanatontosanao amin'ny fananganana toeram-pisakafoanana miaraka amin'ny Just Add Water. Miezaka ny handany ora roa ary hanandrana fialan-tsasatra ho an'ny sandwich trondro ao an-toerana. Io fomba fiasa matihanina io dia mora jerena saingy mandoro mihoatra ny 400 calories isan'ora ho an'ny mpampiasa tsy maotina.
Maka bisikileta manan-tantara
Ny renivohitr'io dia manankarena amin'ny tantara, indrindra fa rehefa tonga amin'ny piraty dia mitomany. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahazoana ny faritry ny tany (sy ny ranomasina) dia amin'ny alalan'ny bisikileta amin'ny dia. Mamangy fitsidihana amin'ny Tour of the Island Tour Center sy ny fiaramanidina amin'ny làlan'i Railway Bermuda - tetikasam-pitrandrahana nasionaly iray izay nalaza ho iray amin'ireo toeram-pialam-boly mahafinaritra indrindra manerantany - alohan'ny handehanana mankany Fort Scaur, izay ahitanao ny fomba fijery mahavariana momba ilay bay .
Miresaha amin'ny trondro
Misaotra ny Renirano Gulf teo akaiky teo, manana ny sasany amin'ireo karazana vatohara tena tsara indrindra eran-tany, i Bermudes, maka amin'ny fikarohana sy ny fikarohana snorkel. Mijoroa akaiky sy manokana miaraka amin'ny harena miafina Atlantika miafina amin'ny alalan'ny Island Tour Center. Trondro ho anao ve ny trondro? Mandany fotoana misesisesy amin'ny manodidina ny sambo mpirenireny any Bermudes.
Tadiavo ny fiadiana ny amboaran'i Amerika
Ny Sound Sound avy any Bermudes dia nampiantrano ny Fiadiana ny Amboara Amerikana 2017 - ilay laharana fiaramanidina iraisam-pirenena manerantany indrindra eran'izao tontolo izao. Mandoa mitsidika ny Royal Naval Dock Yard mba hahitana ireo tantsambo tsara indrindra amin'ny fotoanantsika amin'ny fiarandalamby ny sambo haingana indrindra any an-dranomasina noho ny loka lehibe. Na dia tsy mandeha aza ny sambo, dia ho velona ireo nosy mba hampiantrano ny hetsika iraisam-pirenena - Ny Tanànan'ny Tompondakan'ny Amerikana dia handravona concertes an-taonany, fialam-boly nentim-paharazana ary mpihaza marika malaza any Bermudes.
Jereo ny Sunset avy amin'ny rano
Na dia tsy afaka miditra amin'ny hetsika Amerikana amin'ny tenanao aza ianao, dia mbola afaka misambotra maromaro ihany ianao. Isaky ny zoma hariva, dia afaka manamboatra sambo fitaterana an-tsambo ianao amin'ny UberVida, sambo katolika 70 metatra ampiasaina amin'ny sambo fidirana. Cocktails, dihy, ary ny filentehan'ny masoandro dia tsy mety ho resy.
Elbow Beach Resort, Bermudes
Ny Bakeries tsara indrindra any St. Louis
Patisserie Harmonie Bakery: Bannin tsara indrindra ao Montreal
Toby tsara indrindra an'i Sonoma
Ahoana no hialana any Stockholm, Soeda, any Oslo, Norvezy
Fortune 500 Companies mitantana ao Atlanta, GA
9 Best Coffee Shops any Washington, DC
Pool Maintenance Ireo fahadisoana
The Institution Smithsonian
11 Torohevitra ho an'ny Fiainana Wildlife
Torolalana ho an'ny valam-pirenena ao Canada
Fomba hisafidianana fanomezana amin'ny andro firavoravoana